Ukuphupha ngokuqhomfa Discover ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Sisebenzisa igama elithi "rhoxisa" kwiimeko ezahlukeneyo. Umzekelo, sinokuwuphelisa umsebenzi othile okanye siphazamise imisebenzi yethu. Kwelinye icala, ungayeka ukuhlakulela ubudlelwane nomntu, oko kukuthi, qhawula unxibelelwano. Ngamanye amaxesha, ukuchithwa kwexesha kuthetha ukusikwa kwekhonkrithi kwento okanye ukutya okanye ukudilizwa kwendlu. Intyatyambo efana ne-peony nayo inokuqhawula kwisiqu sayo.
Ezi zinto zikwadlala indima xa "ikhefu" libonakala njengophawu emaphupheni ethu. Umxholo apho siphula into ethile sithatha isigqibo xa kutolikwa umfanekiso wephupha. Iimeko zephupha ngokuqinisekileyo kufuneka zithathelwe ingqalelo kutoliko.
1 Uphawu lwephupha «rhoxisa» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «ikhefu» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «ikhefu» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «rhoxisa» - ukutolikwa ngokubanzi
Ngokusisiseko, uphawu lwephupha lunokuhlala "lurhoxisa" kwinto esele ikho. Yintlungu yalatha iimpembelelo ezimbi. Ukuchazwa ngokubanzi kwephupha kuthatha ukuba ukuphuka kwento ephuphayo kubonisa ukwesaba umntu ochaphazelekayo ukuba abanye banokutshabalalisa izicwangciso zabo ngokuziphatha kwabo. Umntu oleleyo usenokuba nexhala lokuba umntu othile usendleleni yokufezekisa iminqweno yakhe okanye uzama ukonakalisa igama lakhe.
Iphupha licela ukulungisa le ngxaki ngokusondeleyo: Zivela njani ezi zinto zixhalabisayo kuwe? Kukuziphatha kuni komnye umntu okukwenza ukrokreke kangaka?
Ukongeza kule ntsingiselo ngokubanzi yomfanekiso wephupha "ikhefu", amaphupha esimboli anokuvumela izigqibo ezongezelelweyo. Ke, uphawu luvela rhoqo ephupheni ngokunxulumene nokudilizwa kwezakhiwo.
Ukudilizwa kwendlu yamaphupha emva koko kubonisa a Isiqalo esitsha ngendlela efanelekileyo. Ukuphupha kuyazikhulula kwimithwalo endala kwaye kuyaqhubeka. Kwiimeko ezininzi, iphupha lokwahlukana linika ithemba lokuphuculwa kwesikhundla sobungcali.
Ukophula isakhelo, kwelinye icala, kwamkelwe ngokubanzi njengophawu lokuba uyeka imikhwa yakudala emibi. Ukuba kwelinye icala lisebe eliqhekezayo kwimeko yephupha, oku kuyalumkisa. Ukugqithisa. Lowo uleleyo akufuneki alinde ixesha elide ngeli xesha.
Ukuqhekeza iqhekeza lokutya oza kuthi emva koko wabelane nomntu kukushiye nokutya okumnandi nya mekela okanye ubandakanye nomnqweno woluvo loluntu. Uzwane owaphukileyo okanye uzipho, kwelinye icala, lumkisa ngokusilela kunye nokungahambi kakuhle.
Ukuba i-lever iphula ephupheni, umzekelo kwi-grinder yekofu, oku kunokukuxwayisa ukuba kufuneka ujongane nobudlelwane phakathi kwabantu.
Ngubani ophupha ukophula into, kodwa umnxibelelwano, ngokokuchazwa ngokubanzi kwamaphupha, kungekudala uza kwenza njalo. entsha Bahlobo Dibana. Nangona kunjalo, oku akuthethi ukuba ukuphela kobuhlobo obukhoyo. Ukuphupha kuvulelekile eluntwini.
Uphawu lwephupha «ikhefu» - ukutolikwa kwengqondo
Kutoliko lwengqondo ngephupha, uphawu lubhekisa "kwikhefu" cura. Iingcali zengqondo zicinga ukuba iphupha lokwahlukana libonisa ukuba umntu ekuthethwa ngaye unakho ukuphelisa ukuphazamiseka kwengqondo eyedwa.
Oku kuyinyani ngakumbi ukuba indlu idilizwe kwimeko yamaphupha. Nangona kunjalo, ukuba oku kuyenzeka ephupheni ngokuchasene nentando yalowo uleleyo, le ndlela isongela ngokokutolikwa kwephupha. peligro ukulungelelana kwengqondo.
Amaphupha apho uqhekeza ukunxibelelana nomntu afuzisela loo nto Indawo yobudlelwane obuthile. Ngokunokwenzeka umphuphi uye waqonda ukuba akafumani nto komnye. Ke umfowunelwa akwenzi ngqondo ngokwembono yabo. Mhlawumbi lo mntu wayenempembelelo embi kulowo kuthethwa ngaye.
Kutoliko lwengqondo ngokwamaphupha, ukuphela kuyavavanywa kule meko iphantse ibe ntle kuphela.
Uphawu lwephupha «ikhefu» - ukutolika kokomoya
Ikhefu likwiphupha lokomoya njengophawu lomntu obandakanyekayo Yaziwa Shiya ngasemva. Uzimisele ukuqala phantsi.